सिल्टल: सबैभन्दा सामान्य प्रयोग गरिएको डेटा स्क्रैपिंग अनुरोध
अनलाइन स्क्रैपिंग को लागि मांग दिन पछि बढ्दैछ किनकी धेरै कम्पनीहरु को उपयोग विभिन्न उद्देश्यका लागि डेटाको विशाल मात्रा. विभिन्न संस्थाहरू र व्यक्तिहरूसँग विभिन्न वेब स्क्रैपिंग आवश्यकता छन्. वास्तवमा, अहिले, त्यहाँ असीमित प्रकारको डेटा निष्कर्षण आवश्यकताहरू छन्. जानकारी सङ्कलन को महत्व को वर्णन गर्न को लागि,7सबै भन्दा सामान्य प्रयोग को डेटा निष्कर्षण अनुरोध तल उल्लिखित उल्लिखित हो.
1. PDF फाइलहरूबाट डाटा संग्रह
यो डेटा स्क्रैपिंग अनुरोध पीडीएफ फाईलहरूबाट केहि डेटा सङ्कलन र एक्सेल फाईलहरू कन्वर्ट गर्नका लागि हो।. लक्षित डेटा फाईल मध्ये प्रत्येकमा लगभग 15 देखि 20 पृष्ठहरूमा लगभग 15 देखि 20 डाटा बिन्दुहरू छन्.
2. खोज इन्जिन र अनलाइन डाइरेक्टरीहरू
को माध्यमबाट जानकारी निकाल्ने यो एक साधारण डेटा निष्कर्षण आवश्यकता हो. यसले खोज इन्जिन र अनलाईन डाइरेक्टरीहरूबाट डेटा जम्मा गर्न आवश्यक छ र यसलाई निर्दिष्ट डेटाबेसमा प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ.
3. इमेल सूची संगठन र प्रमाणिकरण
यो डेटा निष्कर्ष अनुरोधले ईमेल ठेगाना, कम्पनीको नाम, फोन नम्बर, राज्य, र यो शहर जहाँ यो कम्पनी हो वा त्यो कम्पनीको आवश्यकता छ. यो प्रकारको जानकारी सामान्यतया मार्केटिङ उद्देश्यका लागि चाहिन्छ. जानकारी प्रमाणित हुनुपर्छ र प्रयोगको आसानीको लागि व्यवस्थित हुनुपर्छ. कम्पनीहरु को एक पूरी सूची को निर्देशिका बाट सजिलै संग स्क्रैप गर्न सकिन्छ, तर प्रत्येक कम्पनी को आधिकारिक वेबसाइट देखि अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ.
4. इ-मेल सूची संकलन
यो कार्यले YouTube च्यानलहरू भएका इमेल ठेगानाहरू इकट्ठा गर्नका लागि हो. यो उनीसँग साझेदार गर्न वा कुनै निश्चित उत्पादन / सेवाहरू बजारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. यो महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ.
5. विशिष्ट स्थानमा सबै सम्पत्ति भाडाहरूको सूची
यो वेब निष्कर्षण अनुरोध एक विशेष वेबसाइटमा सम्पत्ति भाडाको सूची प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ।. यद्यपि लक्ष्य वेबसाइटमा धेरै स्थानहरूमा सम्पत्ती भाडाहरूको लिस्टहरू छन्, यस अनुरोधको लागि केवल एक विशेष स्थानका लागि आवश्यक पर्दछ. यसबाट 1400 देखि 1650 सम्मको भाडाको वेबसाइटमा सूचीकृत गरिएका भाडाहरू छन्, आवश्यक पर्खालहरू फिल्टर गरिन्छन्. प्रत्येक भाडा कम्पनीको लागि, आवश्यक विवरणहरू सम्पत्ति ID, नाम र भाडाको विवरण हुन्. सबै निकासी डेटा निर्यातक को एक एक्सेल स्प्रिडशिट मा निर्यात को रूप मा निर्दिष्ट गर्न को लागी चाहिए.
6. संयुक्त राज्य अमेरिका मा वित्त प्रोफेसर को सम्पर्क विवरण
यो डाटा निकासी अनुरोध संयुक्त राज्य अमेरिका को सबै विश्वविद्यालयहरु को वेबसाइटहरु को माध्यम ले खोज को लागी इमेल ठेगानाहरु र वित्त प्रोफेसरों को फोन नम्बरहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी छ।.
7. यूटा मोटर डीलर्सको डाटाबेस
यो वेब स्क्रैपिंग कार्य बेलायती मोटर डीलर्सको संकलनको लागि हो जुन अडी र निसान ब्रान्डहरूमा विशेषज्ञ. प्रत्येक डीलर्सका लागि, आवश्यक विवरणहरू फोन नम्बर, इमेल ठेगाना, हुलाक ठेगाना, व्यवसायिक नाम र प्रबन्धकको नाम हो.
अन्तमा, त्यहाँ सैकड़ों वेब स्क्रैपिंग अनुरोधहरू छन्. माथि उल्लिखित उल्लिखित दृष्टान्तको उद्देश्यका लागि मात्र अनियमित रूपमा चुनेका थिए Source .